Inona No Mitranga Ao Amin’ny Tontolombolongana Afrikana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 14 Oktobra 2018 14:31 GMT
Sombintsombiny vitsivitsy tamin'ny tontolombolongana Afrikana
- Tsuipahan'i Gatwiri ny famoahana gazetiboky Foreign Policy nivoaka ny volana Jolay/Aogositra izay milaza fa firenena tsy mahomby i Kenya . Tsipihany fa “na ny loharanon'ireo antontankevitra nanaovana fikarohana koa aza dia efa tsy azo itokiana”. Milaza izy fa nampiasa an'ireo rindrambaiko mba handalinana ireo angona ana'arivony maro avy amin'ireo media iraisam-pirenena sy eo an-toerana. Raha toa ny media iraisam-pirenena mampiseho an'i Afrika amina endrika tsy matroka (araka izay efa fanaony mahazatra), ary ireo tantarany no ampiasaina ho toy ny loharano, dia efa diso avokoa ny vokatr'io fikarohana io mba hampisehoana fa ireo firenena toa an'i Kenia dia Fanjakana tsy mahomby. Fantantsika rehetra fa tsy mba mahita zavatra mahomby mikasika an'i Afrika ireo media iraisam-pirenena ireo.
- hoe “Darkest Part of…” ampiharina amin'ireo tanibe isankarazany miaraka amin'ireo valiny manaraka (somary mora hamarinina): “Darkest Part of Asia” – valiny 1. “Darkest Part of America” – valiny 7, ny ankamaroany dia arahan'ny teny efa lasa toy ny ao anatin'ny hoe “the darkest part of America’s past..” (ny manjombona indrindra teo amin'ny lasan'i Amerika) ary samy manondro ny vanim-potoanan'ny fanandevozana. “Darkest Part of Europe” – valiny 8, 1 nampiasaina miaro esoeso mifandraika amin'i Norvezy nataon'ny Amerikana iray tsy faly ary ny ambiny kosa mifandraika amin'ny tsy fahampiana masoandro.
“Darkest Part of Africa” – vokatra 679, betsaka indrindra, vokatra mihoa-pampana!
- Mitady an'ireo sarin'ny fiainana andavanandro ao amin'ny Repoblika Demokratikan'i Kongo? Jereo Tangawizi raha izany.
- Vao haingana, nandany 3 volana tany Nizeria i Chippla. Manome hevitra momba izay mitranga any Abuja ireo naotiny mihakasika an'i Abuja. Ohatra, ny ampahany voalohany manome topimaso amin‘ny rafitra vao haingana mifehy ny fiarakaretsaka ao Abuja. Ary ny ampahany faharoa kosa manasongadina ny ady fahefana misy ao anatiin'ny Antoko demokratikam-bahoaka (na Antoko mpamita-bahoaka, araka izay fiantson'ireo eo an-toerana azy).
- Mandritra an'io fotoana io, raha toa ianao ao Londona ka mitady sakafo nizeriana, i Aderemi no mitsimpona ny lisitr'ireo toeram-pisakafoana nizeriana ao Londona.
- Ny Some Among Us, izay manao blaogy avy ao Afrika Atsimo, dia mampifanohitra an'ireo fijerin'i Thabo Mbeki mikasika ny fialàna amin'izay nifanarahana mandritra ny ady nanoherana ny fanavakavaham-bolonkoditra tamin'ny fijerin'i Mbeki ankehitriny momba ilay fialàna rehefa injay fifanatrehana amin'i Mugabe no resahana.